लोडसेडिङ हटाउने कुलमानको टिममा को को थिए ? अब को को थपिदैछन् ? – Purba Aawaj
लोडसेडिङ हटाउने कुलमानको टिममा को को थिए ? अब को को थपिदैछन् ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ३१, २०७८ समय: १९:०५:२७
काठमाडौं गत वर्ष भदौमा आफ्नो कार्यकाल सकेर विदाइ हुँदा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भनेका थिए- ‘नेपालमा अब लोडसेडिङ इतिहास भइसक्यो। कसैले चाहेर पनि लोडसेडिङ फर्किनेवाला छैन।
म नभए पनि मसँग लामो समय काम गरेको टिमले विद्युत प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्नेछ। तर उनी गएको केही समयपछि नै विद्युत अनियमित हुने सम`स्या बढेको थियो। त्यतिबेला नयाँ नियुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले उनको टिमलाई तितिरवितर गरेर नयाँ टिम बनाएका थिए। तर उनीहरु कोही पनि कुलमानको टिममा बसेर काम नगरेकाले व्यवस्थापन चु,स्त हुन सकेन।
शाक्यले रोजेका कर्मचारी भनेका कुलमानले का`र्बा`ही गरेका कर्मचारीहरु बढी थिए। जसका कारण प्राधिकरणको चुहावट बढ्यो र नाफामा ठूलो गि,रावट आयो। पहिलो कार्यकालमा चु,हावट नियन्त्रण र प्राधिकरण लाई वार्षिक १० अर्ब बढी नाफामा लिएका घिसिङ अहिले फेरि कार्यकारी निर्देशकमा फर्किएका छन्। यो दोस्रो इनिङमा उनलाई पहिलेको भन्दा धेरै काम गर्नु छ।
तर प्रश्न छ- यसपटक उनको टोम कस्तो छ? संस्थामा नेतृत्व असल भएर मात्रै हुन्न, नतिजामुखी काम गर्न टिम नै चाहिन्छ। कुलमानले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ हटाउन सक्नुको जस आफैं मात्रै लिएनन्, उनले प्राधिकरणको टिमले गर्दा नै भएको बताउँदै आए। आफूले नेतृ`त्व गरे पनि लक्ष्यअनुसारको काम गर्न उनलाई फेरि सबल टिम जरुरी देखिएको छ।
के कुलमानले पुरानै टिम जुटाउँछन्? ती सहयोगी कहाँ छन्? नयाँको सम्भा`वना के छ? पुनरागमनपछि घिसिङलाई धेरै प्रश्न उठेका छन्, चु`नौ`ती पनि फरक प्रकारको छ। पहिले मुलुकलाई माग धान्ने बिजुली चाहिएको थियो। अब गुणस्तरीय आपू`र्ति व्यवस्थासँगै बढी हुने बिजुली खेर नफाल्ने र प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने चुनौती छ।
तर उनको टिममा बसेर काम गरेका धेरै अनुभवी साथीहरु भने रिटायर्ड भइसकेका छन्। शान्तिलक्ष्मी शाक्य, ब्रजभूषण चौधरी, विष्णु श्रेष्ठ रिटायर्ट भइसकेका छन्। दुई वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहेका विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीलाई समेत शाक्यले अनेक फाइल उल्टाएर जबर्जस्ती राजीनामा दिन बा`ध्य पारेका छन्।
तर उनको राजीनामा स्वीकृत नभइसकेकाले उनी घिसिङको टिममा फर्किन सक्ने प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ। अर्थ निर्देशनालयमा रहेका लेखनाथ कोइराला पनि घिसिङको टिममा काम गरेका अनुभवी उपकार्यकारी निर्देशक हुन्। घिसिङको कार्यकाल सकिदा केही समय निमित्त कार्यकारी निर्देशकसमेत भएका कोइराला आगामी महिना रिटा`यर्ड हुँदै छन्।
उनको टिममा बसेर काम गरेका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख हरराज न्यौपाने अहिले पनि त्यही छन्। उनको कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेकाले उनले फेरि पनि घिसिङको काममा सहयोग गर्न पाउने छन्।त्यस्तै भारप्रेषण केन्द्रमा घिसिङसँग काम गरेका सुरेश भट्टराई थिए।
उनी अहिले पनि भारप्रेषण केन्द्रमै छन्। उनीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर नगरेर कोर टिममा राखेर घिसिङ अघि बढ्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ।त्यस्तै अघिल्लो कार्यकालमा घिसिङको टिममा रहेका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल पनि घिसिङको टिममा रहेर काम गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। उनलाई आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयबाट शाक्यले घिसिङको मान्छे भन्दै इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालयमा सरुवा गरेका थिए।
प्रशासन निर्देशनालयमा लोकहरि लुइटेलले घिसिङलाई साथ दिने छन्। प्रसारण निर्देशनालयमा भने दी`र्घायुकुमार श्रेष्ठले घिसिङलाई साथ दिने छन्। शाक्यले आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमा रहेका मनोज सिलवाललाई सरुवा गरेर रामजी भण्डारीलाई त्यहाँ ल्याएका थिए। घिसिङले उनको ठाउँमा अर्को कर्मचारीलाई ठाउँ दिन सक्ने स्रोतको भनाइ छ।
उत्पादन निर्देशनालयमा रहेका उपकार्यकारी निर्देशक एवं शाक्यका पालाका प्रव,क्ता मदन तिम्सिनाको ठाउँमा पनि घिसिङले नयाँ टिममेट ल्याउन सक्ने प्राधिकरणमा चर्चा छ। विद्युत व्यापार तथा सूचना प्रविधि विभागमा रहेका रवीन्द्र चौधरीको ठाउँमा पनि घिसिङले प्रबल अधिकारीले राजिनामा फिर्ता लिएमा उनैलाई जिम्मेवारी दिन सक्ने छन्। नभए नयाँ कर्मचारी ल्याउने छन्।
घिसिङको चार वर्षे कार्यकालमा प्रबल अधिकारीले उक्त विभाग कुशलतापूर्वक चलाएका थिए। अधिकारी प्रवक्तासमेत नियुक्त भएका थिए। प्राधिकरणमा पदभार सम्हालेकै दिन उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थान, काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्सा,हन र नगर्नेलाई का,र्बा,ही गर्ने भन्दै घिसिङले आ,क्रा,मक हुने संकेत गरिसकेका छन्। बहुमत पुर्‍याउँदा पनि केपी ओलीले सरकार छाडेका थिएनन्,
उनको बहिर्गमनका लागि सर्वोच्च अदा`लतले परमादेश नै दिनुपरेको थियो। बहुमत पुर्‍याएर पनि अदा,लतको परमादेशको बलमा आएको शेरबहादुर देउवाको सरकारले संसदबाट विश्वासको मत लिइसकेको छ। तर चु`नौ`ती कम छैन, सरकारले नतिजामुखी काम देखाउनु पर्नेछ।
यसका लागि चालेका कदममध्येको एउटा हो, प्राधिकरणमा घिसिङलाई ल्याउनु। त्यसैले सरकार जति दबा`बमा छ, घिसिङ पनि प्रष्ट द`बा`बमा छन्। उपलब्धिमूलक काम देखाउनै पर्ने चु`नौ`ती छ। त्यसैले घिसिङले पनि दोस्रो कार्यकाललाई सह´ज रूपमा हेरेका छैनन्।
काम गर्न अनुकूलको टिम बनाउन उनले ‘होम वर्क’ सुरु गरिसकेका छन्। सम्भवतः अबको एक/डेढ महिनामै घिसिङले सक्षम टिम बनाएर काम सुरु गर्न सक्ने स्रोतले जनाएको छ। स्रोत : पहिलो पोस्ट।
Last Updated on: August 15th, 2021 at 7:06 pm